Maareeyihii Garoonka Diyaaradaha Jowhar Oo Si Argagax Leh Udilay Xaaskiisa | Berberatoday.com
Maareeyihii Garoonka Diyaaradaha Jowhar Oo Si Argagax Leh Udilay Xaaskiisa
Jawhar(Berberatoday.com)-Ibraahim Maxamed Cali oo ahaa maareeyihii garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ayaa habeenimadii xalay gudaha magaalada Jowhar dil argagagax leh ugu geystay Xaaskiisa oo ahyd Xaamilo.
Haweenayda la dilay ayaa lagu Magacaabi jiray Jamiilo Sheekh Cali Ibraahin waxaana la sheegay in dhowr xabadood uu madaxa kala dhacay seygeeda.
Arintan oo si weyn ay uga argagaxeen dadka deegaanka ayaa si gaar ah walaac waxa ay ugu beertay qoyska ay ka dhalatay haweenayda la dilay.
Dilka kadib waxaa hoyga qoyskan ay mashaqadu ka dhex dhacday gaaray ciidamo ka tirsan kuwo booliiska Hirshabeelle kuwaasoo gacanta kusoo dhigay gacan ku dhiiglaha galaaftay nolosha xaaskiisa iyadoona xabsi loo taxaabay gacan ku dhiiglahan.
Lama oga waxa ku kalifay in nin masuul ah uu xaaskiisa dil u geysto ay dunida iska calmadeen hase ahaatee dhacdooyinka noocan oo kale ah oo ay isku dilaan dadka xigtada iyo xaasaska ah waa kuwo si weyn mudooyinkii dambe ugu soo badanayay dalka.